Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 15
Azonao lazaina ahy ve ny momba ny toetry ny afo na ny lelafo? Toa zava-mahagaga foana izany. Tsy mahazo fampahalalana mahafa-po avy amin'ireo boky siantifika aho.
Ny afo no fanahin'ny lelafo. Ny lelafo dia ny vatan'ny afo.
Ny afo no singa manentana mampientanentana amin'ny vatana rehetra. Raha tsy misy afo dia hatsangana tsy azo hozongozina ny vatana rehetra. Ny afo dia ao amin'ny vatana tsirairay izay manery ny singa amin'ny vatana no miova. Amin'ny olombelona dia miasa amin'ny endrika isan-karazany ny afo. Ny elanelin'ny afo dia miditra amin'ny fofonaina ary mankany amin'ny ra. Mandoro ny tady fako izay entin'ny ra ary esorina amin'ny fantsona excretory, toy ny pores, havokavoka ary lakandrano tsinay. Ny afo no mahatonga ny fiovana ara-batana, môleolika, Ity fiovana tsy tapaka ity dia miteraka hafanana ao amin'ny vatana. Afo sy oksizenina, ny vatana matavy izay asehon'ny afo, manaitra ny faniriana, miteraka ny firehetan'ny firehetam-po sy ny hatezerana, izay mandoro ny vatan'ny astraly ary mampiasa ny hery manosotra. Ny asan'ny afo toy izany dia singa ary araka ny fanentanana voajanahary.
Misy afo hafa iray, fantatry ny sasany fa afo ny alemika. Ny afo alikaika marina dia ny afon'ny saina izay noeritreretina, izay manohitra ny doro-tsetroka sy ny fifehezana ary manery azy ireo hifanaraka amin'ny famolavolana manan-tsaina araka izay tapa-kevitra; kanefa, rehefa tsy voafehin'ny olombelona, ​​ny firehetan'ny faniriana, ny firehetam-po ary ny hatezerana, dia fehezin'ny saina iraisan'ny rehetra, izany hoe, ny saina amin'ny natiora, izay tsy an'ny tena manokana - antsoina hoe Andriamanitra, natiora, na Andriamanitra mihetsika amin'ny natiora. Ny olona, ​​amin'ny maha-olon-tokana azy, dia mihetsika amin'ny afo mirehitra sy manery azy ireo hifanaraka amin'ny famolavolana manan-tsaina, no mahatonga azy ireo hiditra ao anaty fampifangaroana vaovao ary ny vokatry ny fitambaran'ny afo mirehitra. Amin'ny alàlan'ny eritreritra sy ao an-tsaina dia omena endrika ny tontolo tsy hita maso. Ireo endrika eritreritra ireo ao anatin'ny tontolo tsy hita maso dia manery ny zavatra hampisy azy amin'ny endriny.
Ny sasany mampiavaka ny afo sy ny lelafo dia mafana, ary na dia vetivety foana aza tsy miova dia tsy mitovy amin'ny zava-mitranga hafa fantatsika fa manome hazavana izy ireo, izay mamoaka setroka, ary miova endrika amin'ny alàlan'ny fampihenana azy ireo ho lavenona, fa amin'ny alàlan'ny lelafo, ny vatany dia miseho tampoka rehefa manjavona fa miakatra hatrany ary manondro azy ireo. Ny afo hitantsika dia ny toe-javatra izay ananan'ny fanahin'ny vatana, izay voafatotry ny fananana zava-dehibe, no manafaka ary miverina amin'ny toetrany voalohany. Amin'ny fiaramanidina azy manokana, afaka ny tontolony, tsy mavitrika sy mavitrika ny afo, fa raha ny fisehoana amin'ny alàlan'ny fanoherana dia mihena sy voafehy ny asan'ny afo ary amin'ny farany dia mitazona ao anaty vatan'ny fanahy, fa ny afo no fanahy amin'ny vatana rehetra. Ny afo mifatotra amin'ny raharaha matotra mety antsointsika hoe afo miharihary. Ity afo mihetsika ity dia ao amin'ny fanjakan'ny natiora rehetra. Ny afo malefaka kosa dia mavitrika kokoa amin'ireo departemanta sasantsasany amin'ny fanjakana tsirairay fa tsy amin'ireo departemanta hafa ao amin'ilay fanjakana. Izany dia asehon'ny flint sy solifara ao amin'ny mineraly, amin'ny hazo mafy sy mololo amin'ny fambolena legioma ary amin'ny tavy sy ny hoditra amin'ny vatan'ny biby. Ny afo malefaka dia misy tsiranoka sasany, toy ny menaka. Ny vatana mihetsiketsika dia mitaky ny fisian'ny afo mavitrika handroaka sy hanafaka ny tsy hita ao am-ponja fotsiny. Raha vao nilevina ilay afo, dia hita maso vetivety ny afo, ka mandehana amin'ny tontolo tsy hita izay niaviany.
Ny afo dia iray amin'ireo singa efatra fantatry ny asan'ny maizina. Ny afo no tena tsy fahita firy amin'ireo singa. Tsy hita amin'ireo maso ireo singa fantatra amin'ny hoe afo, rivotra, rano ary tany, afa-tsy amin'ny toe-piainana farany indrindra. Noho izany dia tsy mahita afa-tsy ireo faritra na ambany indrindra amin'ireo singa izay lazaintsika fa tany, rano, rivotra ary afo. Ny singa tsirairay ao aminy dia ilaina amin'ny fananganana zavatra ara-batana, ary ny singa tsirairay dia aseho amin'ny alàlan'ny tsirairay. Rehefa mihazona singa efatra mifangaro amin'ny ampahany sasany ny singa tsirairay amin'ny lafiny ara-batana, dia miverina amin'ny toetrany ny singa tsirairay avy raha vao tapaka ny mitambatra. Ny afo no mampisaraka ny fampifangaroana ary mahatonga ireo singa izay niditra tao amin'ilay fampifangaroana mba hiverina any amin'ny toetrany tany am-boalohany. Rehefa levona ny afo, izany no antony lehibe indrindra amin'ny vatana marefo, dia toa mandeha ihany. Rehefa mandalo izy dia mahatonga ny singa ny rivotra, ny rano ary ny tany hiverina amin'ny loharano maro samihafa. Ny rivotra miverina sy ny rano dia hita ao amin'ny setroka. Ny ampahany amin'ny setroka izay rivotra, ary tsikaritra fa matetika ao anaty ny setroky ny setroka dia tsy hita maso. Ny ampahany amin'ny setroky ny setroka izay rano dia miverina amin'ny rano avy amin'ny rano hamandoana, ary mihantona eny amin'ny rivotra ary lasa tsy hita maso. Ny hany sisa tavela dia ilay ampahany lehibe indrindra amin'ny tany eto an-tany, izay ao anatin'ny soot sy ny lavenona. Ankoatra ny afo malefaka dia misy afo simika izay asehon'ny fihetsika manala ny simika sasany izay mifandraika amin'ny simika hafa, amin'ny alàlan'ny oksizenina ateraky ny ra ary amin'ny ferment izay mahatonga ny fandevonan-kanina. Avy eo dia misy ny alikaola izay vokarin'ny eritreritra. Ny fihetsiky ny afo alikaika no mahatonga ny faniriana be ho avo kokoa ho faniriana ambony kokoa, izay nohavaozina sy ampidirina indray amin'ny faniriana ara-panahy, avy amin'ny alalàn'ny eritreritra ara-panahy. Avy eo dia misy ny afo ara-panahy izay mampihena ny hetsika sy ny eritreritra rehetra ho fahalalana ary manangana vatana ara-panahy tsy mety maty, izay mety ho tandindona vatana ara-panahy.
Inona ny antony mahatonga ny fifangaroana lehibe, toy ny doro afovoany sy ny afo izay toa mitsimoka miaraka matetika avy any amin'ny faritra samihafa amin'ny tanàna iray, ary inona ny fanesorana an-tsitrapo.
Betsaka ny antony mahatonga ny conflagrations, saingy maro amin'ireo antony ireo no aseho ao amin'ny antony mahatonga ny conflagration, izany hoe fisian'ireo singa-afo alohan'ny hisehoan'ny lelafo. Tokony ho takatra fa ny afo ho singa iray dia mahavita mampifangaro amin'ireo singa hafa, amin'ny fiaramanidina afo, na amin'ny fiaramanidina hafa. Amin'ny fampifangaroana ireo singa samihafa dia mahazo valiny mazava isika. Rehefa eo am-pelatanana mahery ny singa mifono afo dia manjaka ireo singa hafa manatrika ary manery azy ireo tsy hahalala amin'ny alàlan'ny fisiany mahery. Ny fisian'ny singa-afo dia mamono ny afo any amin'ireo vondron'olona mifanila aminy ary amin'ny alàlan'ny lelafo mandalo dia miverina ao amin'ny loharano niaviany ny singa mandoto. Ny lelafo miakatra dia ampiasain'ny afo mandrehitra azy hiditra eo amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny lelafo. Rehefa manjaka ny habakabaka ny singa mifehy ny afo dia miasa amin'ny raharaha marefo rehetra izy io; Avy eo tamin'ny fihantsiana mahafinaritra, toy ny famoronana, dia lasa nidedadeda ity raharaha ity. Prairie na doro ala dia mety hitranga amin'ny afon'ny mpandehandeha, na amin'ny tara-pahazavana amin'ny masoandro mody, ary ny fitongilanana dia mety ho antony fandoroana tanàna lehibe, saingy tsy izany mihitsy no antony lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra. Matetika ny olona dia nahatsikaritra fa ny fiezahana hanangana afo ao anaty fepetra tena ankasitrahana dia matetika manaraka ny tsy fahombiazana tanteraka, raha toa kosa, amin'ny fantsom-panala mamirapiratra amina baoritra, na eo am-pototry ny trano lehibe iray izay toa tsy misy toa ankehitriny izay mora may, nefa ny afo dia namboarin'ny tapa-kiraro mamirapiratra ary niparitaka be tokoa ka nandoro tranobe iray manontolo, nefa na dia lehibe aza ny ezaka natao dia ny hamonjy azy. Ny fifangaroana izay nandany tanàna lehibe dia noho ny fisian'ireo singa-afo amin'ny tranga rehetra ireo, na izany aza dia maro ny antony mpandray anjara hafa.
Ny famonoana tampoka dia voalaza fa haingana loatra mampiray amin'ny fivontosana zavatra miady amin'ny oxygen. Fa ny antony dia noho ny fanomanana ny olana misy fihenan-doha izay mahasarika ny singa mandoro. Araka izany, ny fifamaliana eo amin'ireo fitaovana roa marefo, toy ny menaka sy ny famafazana, dia arahin'ny fampivondronana tampoka ilay raharaha miaraka amin'ny oxygen eny amin'ny rivotra; izany dia manosika ny singa mandoro afo, izay manomboka ny lelafo.
Ahoana no mahatonga ny metaly toy ny volamena, varahina ary volafotsy?
Misy metaly fito, izay antsoina indraindray hoe metaly masina. Ny tsirairay amin'izy ireo dia ny hery, hazavana na kalitao mipoitra sy migadra izay mivoaka avy amin'ny iray amin'ireo vatana fahazavana fito hitantsika eny amin'ny habakabaka sy antsointsika hoe planeta. Ny hery, na hazavana, na kalitaon'ny tsirairay amin'ireo vatana izay antsointsika hoe planeta dia voasarika amin'ny tany sy ny volana. Miaina ireo hery ireo ary antsoina hoe fanahin'ireo singa na planeta. Ny tany sy ny volana miaraka aminy dia manome vatana sy endrika an'ireo hery fototra. Ny metaly dia maneho ireo dingana fito na ambaratonga fito izay tsy maintsy andehanan'ny hery miorina amin'ny fanjakana mineraly alohan'ny ahafahan'izy ireo manana antity miavaka sy hiditra amin'ireo fanjakana avo lenta amin'ny natiora. Betsaka ny fampiasana azo ametrahana ireo metaly fito. Mety hisy ny fanasitranana ary ny aretina dia azo avy amin'ny fampiasana na fampiasana amin'ny fomba ratsy ny metaly. Ireo metaly dia manana toetra manome fiainana ary koa toetra mahafaty. Ny iray amin'ireny dia mety hipoitra, amin'ny fahatsiarovan-tena na tsy fahatsiarovan-tena, rehefa misy ny fepetra sasany manjaka. Mety ho fomba fiasa ny manome ny filaharan'ny fivoaran'ny metaly sy ny toetra tsara mifandraika amin'izany, na dia manana ny zava-misy aza izahay, satria, na eo aza ny fivoarana milamina avy amin'ny fanjakana mankany amin'ny toetoetran'ny hery ifotony miasa amin'ny metaly, ity baiko ity dia tsy azon'ny olona rehetra nampiasaina; izay mihatra amin'ny tombotsoan'ny tsirairay dia manimba ny iray hafa. Ny olona tsirairay, na dia natsangana araka ny drafitra iray ihany aza, dia manana ny toetrany izay mifanaraka amin'ny fanahy fototry ny metaly; ny sasany amin'ireny dia mahasoa, ny hafa kosa tsy mampatahotra. Amin'ny ankapobeny, ny volamena dia maneho ny dingana avo indrindra amin'ny fampandrosoana eo amin'ny metaly. Ny metaly fito resahina dia ny firaka, volamena, merkiora, varahina, volafotsy sy vy firaka. Ity fanisana ity dia tsy tokony horaisina ho filaharan'ny fandrosoana, na ny mifamadika.
Ny metaly izay tena fahita amin'ny vanim-potoana taloha dia tsy dia fahita firy amin'izao fotoana izao. Ny volamena dia heverinay ho sarobidy indrindra amin'ny metaly fito, na dia tsy izany aza no ilaina indrindra. Azontsika atao ny mizara volamena mora kokoa noho ny mahazo vy. Amin'ireo metaly ireo, ny vy no tena ilaina indrindra amin'ny sivilizasiona antsika, satria miditra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana indostrialy, toy ny fananganana rafitra avo, ny fananganana trano ary ny fampiasana lakana, ny lalamby, milina, fitaovana, kojakoja ao an-tokantrano ary fanaka. . Ampiasaina amin'ny tanjona haingoana io, ary ilaina sy ilaina amin'ny fitsaboana. Ny sivilizasiôna hafa dia nihazakazaka tamin'ny vanim-potoana samy hafa, izay fantatra amin'ny hoe volamena, volafotsy varahina (na varahina) ary vanim-by vy. Ny olona eto an-tany, amin'ny ankapobeny, dia ao anatin'ny vanimpotoana vy. Fotoana sarotra izany ary izay miova haingana kokoa noho ny hafa rehetra. Ny zavatra ataontsika izao dia hisy fiantraikany amintsika bebe kokoa noho ny vanim-potoana hafa satria ny zavatra dia mivoatra haingana kokoa amin'ny vanim-by vy noho ny an'ny olon-kafa. Ny antony dia arahin'ireo vokatr'izy ireo haingana kokoa amin'ny vy noho ny amin'ny vanim-potoana hafa. Ny antony napetrakay ankehitriny dia ho lasa amin'ny vanim-potoana manaraka. Ny vanimpotoana manaraka dia ny vanim-potoana volamena. Any Amerika, izay misy hazakazaka vaovao miforona dia efa efa nandia azy isika.
Ireo metaly fito eto dia voatanisa ao amin'ireo singa hafahafa hafahafa napetraka sy napetraky ny siansa maoderina. Raha ny amin'ny fomba namoronana azy ireo dia nilaza izahay fa ny hery, jiro, na toetra avy amin'ireo vatana fito eny amin'ny habakabaka, antsoina hoe planeta, dia voasarika amin'ny tany. Mametraka manintona andriamby ny tany ary, noho ny toe-javatra misy dia misy ireo hery ireo izay miorina tsikelikely amin'ny alàlan'ny accretion, mamorona poti-poti-potika ao anatin'ny fehikibo manintona ny hery. Ny tsirairay amin'ireo hery fito dia fantatra amin'ny lokony sy ny kalitaony ary ny fomba iarahan'ireo zana-tsokajy. Ny fotoana ilainy amin'ny fananganana metaly iray dia miankina amin'ny toe-javatra misy, satria ny volamena dia azo amboarina ao anatin'ny fotoana fohy indrindra rehefa misy ny fepetra ilaina rehetra.